တန်ပြန်နှင့်အော့ဖ်စက်သင်တန်း - World Trade Exchange
ငွေမရှိသောပိုင်ဆိုင်မှုများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများကို ၀ ယ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း။
ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများ (စက်ယန္တရားများ၊ စက်ပစ္စည်းများ၊ နည်းပညာများ၊ စက်ရုံတစ်ခုလုံး၊ သတ္တုတွင်းများ၊ အလှည့်ကျစက်ရုံများစသည်ဖြင့်) ကိုဝယ်ယူရန်သို့မဟုတ်လက်ရှိစက်မှုလုပ်ငန်းများကိုငွေမချွေတာဘဲဝယ်ယူသူများအားသင်၏ဝယ်ယူမှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ရန်ဖြစ်သည် သို့မဟုတ်ဝယ်ယူစာချုပ်မှတဆင့်ဝယ်ယူ။ BUYBACK သည်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ / ရောင်းချသူ၏ငွေကြေး၊ ချေးငွေနှင့်အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြု၍ ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ကုမ္ပဏီများနှင့်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်ဝယ်ယူခြင်းအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့သည့်ကုန်သွယ်ရေးပုံစံဖြစ်သည်။
ပြန်လည်ဝယ်ယူမှုကန်ထရိုက်သည်တန်ပြန်ရောင်းဝယ်ရေးသဘောတူစာချုပ်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အငြင်းပွားနေသောထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ (စက်ယန္တရားများ၊ စက်ပစ္စည်းများ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံတစ်ခုလုံး၊ သတ္တုတွင်း၊ အလှည့်ကျစက်ရုံစသည်တို့) ကိုရောင်းသူ / ပေးသွင်းသူကအချို့ပိုင်ဆိုင်မှုများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများကပေးချေရန်သဘောတူကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသောထုတ်ကုန်များသည်စက်ရုံ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီ၏လည်ပတ်မှုမှထုတ်လုပ်သည်။
Buyback Contract အရပေးသွင်းသူသည် ၀ ယ်ယူသည် ကြိုတင်ငွေပေးရခြင်းမရှိဘဲသင့်အတွက်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ နှင့်အတူထုတ်လုပ်ကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်သဘောတူသည် စက်ရုံ ငွေပေးချေမှုအဖြစ်။
ဤနည်းဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၊ ဘဏ်များ၊ ဘဏ္institutionsာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများသို့သွားစရာမလိုဘဲအလျင်အမြန်လိုအပ်သောထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများကိုသင်ငွေမချနိုင်ဘဲရရှိနိုင်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်ဝယ်ယူမှုကန်ထရိုက်အပေါ် အခြေခံ၍ (ဒေါ်လာငွေရေးကြေးရေးမပါသော) ရောင်းချသူတစ် ဦး ထံမှဒေါ်လာ ၅၀၀ မီလီယံထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီကိုသင်ဝယ်ယူနိုင်သည်။ စက်ရုံတည်ဆောက်ပြီးနောက်ခြောက် နှစ်မှစ၍ သင်၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံမှထုတ်လုပ်သောထုတ်ကုန်အချို့ကိုပြန်လည်ဝယ်ယူရန်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူကသဘောတူသည်။ ၆ နှစ် မှစတင်၍ သင်၏စက်ရုံ၏ထုတ်လုပ်မှုပြန်လည် ၀ ယ်ခြင်းသည်သင်၏ဒေါ်လာ ၅၀၀ မီလီယံကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ၏ငွေပေးချေမှုကိုထောက်ပံ့လိမ့်မည်။
ဥပမာအားဖြင့်သင်ဝယ်ယူမှုကန်ထရိုက်ကို အသုံးပြု၍ ကြိုတင်ငွေပေးချေခြင်းမပြုဘဲဒေါ်လာ ၅၀ ဘီလီယံရေနံချက်စက်ရုံကိုသင်ဝယ်ယူနိုင်သည်။ ဒေါ်လာ ၅၀ ဘီလျံရှိသောရေနံချက်စက်ရုံကို ၀ ယ်ယူခြင်းသည်သန့်စင်ထားသောရေနံကိုပြန်လည်ရောင်းချခြင်းဖြင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့လိမ့်မည်။th တစ်နှစ်။
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဂျင်းဘောင်းဘီကိုထုတ်လုပ်သူ Levi Strauss ကဥရောပ၏လုပ်ငန်းများကိုတိုးချဲ့ရန်ဆုံးဖြတ်သောအခါဟန်ဂေရီအစိုးရနှင့်စတင်ဆွေးနွေးသည်။ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံသည်အပြာရောင်ဂျင်းဘောင်းဘီစက်ရုံတစ်ရုံတည်ဆောက်လိုသော်လည်း၎င်းအတွက်ငွေအလုံအလောက်မရရှိခဲ့ပါ။ အဖြေ - ဟန်ဂေရီသည် Levi Strauss မှပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများကိုဝယ်ယူပြီး Levi Strauss သည်ထုတ်လုပ်မှု၏ဝေစုကိုပြန်လည်ဝယ်ယူရန်သဘောတူခဲ့သည်။ ယခုကုမ္ပဏီသည်စက်ရုံ၏နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှု၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုရယူသည်။ တစ်နှစ်လျှင်တစ်သန်းနီးပါးထုတ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည်ဥရောပနှင့်အာဖရိကတွင်ရောင်းချသည်။
လေဝိ၏ပြန်လည်ဝယ်ယူမှုသဘောတူညီချက်နှင့်၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အပြောင်းအလဲများသည်များသောအားဖြင့်ကုန်သွယ်ရေးကုန်သွယ်ရေးဟုခေါ်သည်။ အမှန်မှာလွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်အတွင်းအစိုးရအရာရှိများ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းလေ့လာသုံးသပ်သူများကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုအားလုံး၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောကုန်သွယ်မှုသည်ကုန်သွယ်မှုနှင့်သွားမည်ဟုခန့်မှန်းထားသည်။
ငွေမချသောဒေါ်လာ ၇၅၀ မီလီမီတာအကွာအဝေးရှိသောစက်ရုံ။
WTE ၀ ယ်သူအားကူညီသူသည်ဒေါ်လာ ၇၅၀ မီလီမီတာအလူမီနီယမ်စက်ရုံတစ်ရုံကို ၀ ယ်ယူသူအစီအစဉ်မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအတွက်အရင်းအနှီးမပါရှိဘဲကူညီခဲ့သည်။ ဤပြန်လည်ဝယ်ယူမှုအစီအစဉ်တွင်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူကစက်ရုံကိုတည်ဆောက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အား alumina (ဘွတ်ဆိုက်နှင့်ရွှံ့တွင်တွေ့ရသောအလူမီနီယံ၏အောက်ဆိုဒ်) ကိုလည်းပေးခဲ့သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်အလူမီနီယမ်စက်ရုံနှင့်အလူမီနီယမ်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများသည်စက်ရုံတည်ဆောက်ရန်အတွက်ငွေပေးချေမှုအဖြစ်နောက် ၁၀ နှစ်တာကာလအတွင်းစက်ရုံမှထုတ်လုပ်သည့်အလူမီနီယံ၏ ၂၀% ကိုပြန်လည်ဝယ်ယူရန်သဘောတူခဲ့ကြသည်။
ဒေါ်လာ ၅၀၀ မီလီယံရှိသောကြေးနီသတ္တုရိုင်းတစ်မျိုးကိုထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံမှငွေမရှိဘဲဝယ်ယူထားသော!
WTE ငွေမချွေဘဲဒေါ်လာသန်း ၅၀၀ တန်သောကြေးနီသတ္တုရိုင်းစက်ရုံကိုဝယ်ယူရန်ဖောက်သည်တစ် ဦး အားကူညီခဲ့သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူကစက်ရုံထုတ်လုပ်မှု၏ ၂၅% ကိုနောက် ၁၅ နှစ်အတွင်းပြန်ပေးချေရန်သဘောတူခဲ့သည်။
ဒေါ်လာ ၂.၅ ဘီလျံရှိသောအင်ဂျင်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတစ်ခုမှငွေမချပါ။
၀ ယ်ယူရန်သဘောတူညီမှု၏ဥပမာကောင်းတစ်ခုမှာမကြာသေးမီက Volkswagen ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်ဂျာမန်ကုမ္ပဏီတို့အကြားသဘောတူညီချက်ဖြစ်သည်။ ဤသဘောတူစာချုပ်က VW ကိုဂျာမနီကုမ္ပဏီသို့တစ်နှစ်လျှင်အင်ဂျင် ၂၈၆,၀၀၀ ထုတ်လုပ်နိုင်သည့်ပြီးပြည့်စုံသောထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတစ်ခုပို့ပေးရန်တာဝန်ရှိသည်။ ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းနှင့်လိုင်စင်သဘောတူညီချက်များအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကို VW သို့တစ်နှစ်လျှင်မော်တာ ၁၀၀.၀၀၀ တင်ပို့ခြင်းဖြင့်ပေးရမည်။
တစ် ဦး တည်းသောငွေနှင့်အတူဝယ်ယူတစ် ဦး $ 235 သန်းမီသိန်းစက်ရုံ။
WTE ပိုက်ဆံနည်းနည်းဖြင့်ဒေါ်လာ ၂၃၅ သန်းတန်သောမက်သနောစက်ရုံကိုဝယ်ယူသူတစ် ဦး အားကူညီခဲ့သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် Methanol စက်ရုံ၏ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများသည်လာမည့် ၁၅ နှစ်အတွင်းအပင်ထုတ်လုပ်မှု၏ ၂၅% ကိုပြန်လည်ပေးချေရန်သဘောတူကြသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၊ ဘဏ်များ၊ ဘဏ္financialာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်မ ၀ င်ဘဲဒေါ်လာ ၂၃၅ မီလီယံမက်သနောအစီအစဉ်ကို ၀ ယ်ယူသူသည်ဝယ်ယူခဲ့သည်။
တစ် ဦး $ 20b သတ္တဝါရေနံ AMMONIA buyback သဘောတူညီချက်။
၀ ယ်ယူမှုသဘောတူညီချက်၏ဥပမာတစ်ခုမှာရုရှားကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ ၂၀ ရှိသော Occidental Petroleum အမိုးနီးယားအရောင်းအ ၀ ယ်ဖြစ်သည်။ Occidental သည်ရုရှားများအားအမိုးနီးယားအပင်များကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ဆောက်လုပ်ခြင်းတွင်ကူညီခဲ့ပြီးအနှစ် ၂၀ အတွင်းထိုအပင်များမှထုတ်လုပ်သောအမိုးနီးယားပမာဏဝယ်ယူရန်သဘောတူခဲ့သည်။ ပါတီများစွာသည်ဤပြန်လည် ၀ ယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်ခဲ့ကြပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ (ရှယ်ယာ၊ အရင်းအနှီးပစ္စည်း၊ ချေးငွေ၊ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ အခြေခံအဆောက်အအုံအထောက်အပံ့နှင့်နည်းပညာလွှဲပြောင်းခြင်း) ။ အဆိုပါပေးသွင်းဝယ်ယူခြင်းနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးငွေကြေးထောက်ပံ့။ ပွဲစားများနှင့် switch ကုန်သည်များပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။ ပေးချေသူများအားနောက်ဆုံးငွေပေးချေခြင်းမပြုလုပ်မချင်းဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များသည်ရန်ပုံငွေ၏ဂေါပကအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ WTE ဒီငွေပေးငွေယူတွင်ပါဝင်ပတ်သက်မခံခဲ့ရပါဘူး။
ဒေါ်လာ ၈၀၀ မီလီယံဘိလပ်မြေထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံကိုမည်သည့်ငွေကြေးနှင့်မျှငွေမချပါ။
WTE ငွေမချွေဘဲဒေါ်လာသန်း ၈၀၀ တန်ဖိုးရှိဘိလပ်မြေထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံတစ်ရုံကို ၀ ယ်ရန်ဖောက်သည်တစ် ဦး အားကူညီခဲ့သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်ဘိလပ်မြေထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများသည်လာမည့်နှစ် (၂၀) ​​ကာလအတွင်းစက်ရုံထုတ်လုပ်မှု၏ ၁၀% ကိုပြန်လည်ပေးချေရန်သဘောတူကြသည်။
ငွေမချဘဲဒေါ်လာ ၅၀၀ မီလီမီတာဝယ်ယူမှုအပေးအယူ။
ထိုကဲ့သို့သောပြန်လည်ဝယ်ယူမှုအစီအစဉ်တစ်ခုတွင်ပြင်သစ်အင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီ Technip ကတစ်နှစ်လျှင်ဘင်ဇင်တန် ၁၂၅၀၀၀၊ orthoxylene တန်ချိန် ၁၆၅၀၀၀ နှင့်ပါကင်ဆန်တန် ၁၆၅၀၀၀ ထုတ်လုပ်မည့်စက်ရုံ ၂ ခုအားထောက်ပံ့ရန်သဘောတူခဲ့သည်။ ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်လိုင်စင်များအတွက်လျော်ကြေးငွေအနေဖြင့်လက်ခံရရှိသည့်ကုမ္ပဏီသည်နှစ်စဉ်ဆယ်နှစ် orthoxylene တန်ချိန် ၂၀၀၀၀ နှင့်ပါကစီလင်းတန်ချိန် ၂၀၀၀၀ ပေါင်းနှင့်ဆက်စပ်သောရေနံဓာတုထုတ်ကုန်များကိုနှစ်စဉ်ရောင်းချရန်သဘောတူခဲ့သည်။ သဘောတူညီချက်၏စုစုပေါင်းတန်ဖိုး $ 125,000 သန်းဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒေါ်လာ ၂၅ သန်းတန်ကြေးရှိသောအငွေ့ပျံနေသောစက်ရုံကိုငွေမချဘဲဝယ်ယူခဲ့သည်
WTE ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်နှင့်ခရမ်းချဉ်သီးပြုပြင်စက်ကိုရောင်းသူအကြားပြန်လည် ၀ ယ်ယူမှုအစီအစဉ်ကိုစတင်တည်ဆောက်ခြင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ကူညီခြင်းအားဖြင့်မည်သည့်အရင်းအနှီးမှမပါဘဲခရမ်းချဉ်သီးငါးပိစက်ရုံကိုဒေါ်လာ ၂၅ သန်းရရှိရန်ဖောက်သည်တစ် ဦး အားကူညီခဲ့သည်။ ခရမ်းချဉ်သီးငါးပိပြုပြင်စက်ရုံ၏ရောင်းချသူသည်စက်မှထုတ်လုပ်သောခရမ်းချဉ်သီးငါးပိများကိုတင်ပို့ခြင်းဖြင့်ငွေပေးချေရန်သဘောတူခဲ့သည်။ ပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်စက်၏ ၀ ယ်ယူသူကစက်ရုံအတွက်ငွေပေးချေမှုအနေဖြင့်ရောင်းသူမှသိုလှောင်ထားသည့်ခရမ်းချဉ်သီးငါးပိကိုလုံလောက်စွာတင်ပို့နိုင်သည်။
ZIMBABWE, CONGO နှင့် China တို့အကြားဒေါ်လာ ၃.၅ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတြိဂံ ENERGY BUYBACK သဘောတူညီချက်။
ဇင်ဘာဘွေမှ Hwange Colliery ကုမ္ပဏီသည်ကျောက်မီးသွေးဝယ်ယူခွင့်အတွက်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်များတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သောနိုင်ငံခြားငွေများကိုတရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုတရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုခေါ်ယူခဲ့သည်။ Hwange သည်သတ္တုတူးဖော်ရေးစက်ကိရိယာများအတွက်ပြန်လည်ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိသောကျောက်မီးသွေးနှင့်ကိုကာကိုလာများကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ဆက်ဆံရေးမန်နေဂျာဂျွန်နကလာကပြောကြားသည်မှာကျောက်မီးသွေးတွင်းနှင့် NORINCO တို့သည်ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ (DRC) မှ NORINCO မီးဖိုများကိုကျောက်မီးသွေးနှင့်ကော့တို့ဖြင့်ထောက်ပံ့ရန်သဘောတူခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည် သူက NORINCO သည် Hwange အား Komatsu နှင့် Caterpillar မြေတူးဖော်သည့်ပစ္စည်းကိရိယာများထောက်ပံ့ရန်သဘောတူခဲ့သည်ဟုသူကပြောသည်။
ဇင်ဘာဘွေစွမ်းအင်သုံးလျှပ်စစ်စွမ်းအား ZESA သည် CATIC နှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃.၅ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာချုပ်များကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ CATIC သည်ကျောက်မီးသွေးဝယ်ယူခွင့်အတွက် Hwange 3.5 &7နှင့် Kariba 8 &7ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများကိုချဲ့ထွင်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။
၀ ယ်ယူမှုသဘောတူညီချက်၏ဥပမာတစ်ခုမှာဗြိတိသျှကုမ္ပဏီ ၂ ခုဖြစ်သောအိုင်စီအိုင်နှင့်ဒေးဗီပါဂတ်စ်တို့ကမက်သနောစက်ရုံကိုဒေါ်လာသန်း ၂၅၀ ဖြင့်ရောင်းချပြီးနောက် ၁၀ နှစ်အတွင်းစက်ရုံ၏ထုတ်လုပ်မှု၏ ၂၀% ကိုပြန်လည်ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပေးဆပ်ရန်သဘောတူသည်။
WTE စင်ပေါ်ယူနစ်ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး သည်ပြန်လည်ဝယ်ယူမှုအစီအစဉ်မှတစ်ဆင့်ငွေမကုန်ဘဲ ၁၀ နှစ်တာကာလအတွင်းသံမဏိထုတ်ကုန်များ၏အာမခံချက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဤပြန်လည်ဝယ်ယူမှုလုပ်ငန်းတွင်သံမဏိထုတ်လုပ်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည် (စင်ပေါ်ထုတ်လုပ်သူ) အားကြိုတင်ငွေပေးချေခြင်းမရှိဘဲစင်များကိုထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်, သံမဏိထုတ်လုပ်သူကုန်ကြမ်းသံမဏိနှင့်အတူစင်ပေါ်ထုတ်လုပ်သူပေးဆောင်, စျေးနှုန်းလျှော့ချနှင့်ပြန်စင်မှပြန်ဝယ်ယူရန်သဘောတူခဲ့သည်။ နောက်တစ်နည်းပြောရလျှင်စင်ပေါ်ယူနစ်များနှင့်စနစ်များထုတ်လုပ်သူသည်သံမဏိကုန်ကြမ်းကိုသံမဏိဖြင့်ထုတ်လုပ်သောစင်များနှင့်ပေးချေသည်။
OFFSET & ကောင်တီ။
တန်ပြန်ရောင်းဝယ်မှုနှင့်အပေးအယူလုပ်ခြင်းများတွင်တိုက်ရိုက်ပါ ၀ င်သောကုမ္ပဏီများမှာအကြီးမားဆုံးသောနာမည်များဖြစ်သည် - General Motors, General Electric, Boeing ကုမ္ပဏီ၊ Lockheed-Georgia, Martin Marietta Aerospace, Texas Instruments, Sperry Corp. , Singer Co. , Alcoa, Polaroid, SC Johnson & Sons, နှင့် Nabisco, DuPont, Dow Chemical, Cyanamid, Smith-Kline နှင့် Amaco နှင့် Ethyl ကော်ပိုရေးရှင်း Lockheed-Georgia တို့၏ဓာတုဌာနခွဲများ၊ Martin Marietta Aerospace, Texas Instruments, Sperry Corp. , Singer Co, Alcoa, Polaroid, SC Johnson & Sons နှင့် Nabisco ။ Fortune ၅၀၀ ကုမ္ပဏီများ၊ နယူးယောက်စတော့အိတ်ချိန်းစာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများစသဖြင့်
အမေရိကန်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဌာန - ကုမ္ပဏီများသည်နစ်နာကြေးကိုရယူသည်။
အမေရိကန်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း ၀ ယ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာန၏အဆိုအရကာကွယ်ရေးကုမ္ပဏီအများစုသည်နိုင်ငံအများစုမှပြဌာန်းထားသောကြောင့်နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုအများစုကိုရရှိရန်အတွက် offset နှင့် countertrade များကိုအသုံးပြုကြသည်။ ၎င်းတို့တွင် Litton၊ Grumman International၊ Garrett၊ BMY၊ TRW၊ Perkin-Elmer၊ Emerson Electric၊ General Dynamics, Northrop, Allied Signal, Motorola, ITT, Raytheon နှင့် LTV Aerospace and Defense Co.
တန်ပြန်ရောင်းဝယ်မှု၊ ၀ ယ်ခြင်းနှင့်အပေးအယူလုပ်ခြင်းများ၌ပါ ၀ င်သောကာကွယ်ရေးမဟုတ်သောကုမ္ပဏီများတွင် Xerox, IBM, Occidental Petroleum, ContiGroup Companies, Inc (CGC), Caterpillar, Monsanto, The Kraft Heinz Company, Goodyear, Rockwell Automation, Inc. , General Electric တို့ပါဝင်သည်။ FMC, Tenneco, 3M, Coca-Cola, United Technologies, Pepsi-Cola နှင့်အခြားသူများ။ ”
WTE လူသိများသောကော်ပိုရေးရှင်းများစွာသည်အစိုးရကန်ထရိုက်များရရှိရန်အတွက်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းနှင့်အော့အန်မှုများပြုလုပ်ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။ တစ်ခုကတော့ကာကွယ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုပါ။ နောက်တစ်ခုကဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီပါ။ တစ်ခုကလေကြောင်းလိုင်းတစ်ခုပါ။ နောက်ထပ်ကားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ခုကရေနံကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ခုကသံမဏိထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ခုကတော့ရေကြောင်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ခုကသတ္တုတွင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ခုမှာအီလက်ထရွန်းနစ်လုပ်ငန်းစုတစ်ခုဖြစ်ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအခြားကော်ပိုရေးရှင်းများထောင်နှင့်ချီ။ ရှိသည်။ တန်ဘိုးရှိသောအမြတ်အစွန်းပမာဏကိုတန်ပြန်ရောင်း ၀ ယ်မှုများနှင့်အော့ဖ်ဆက်များ၏တန်ဖိုးများကိုသိရန်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ရှိနေသည်။ ၎င်းသည်ဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီနေသည်။
$ 6.5B CAS INFUSION
နိုင်ငံပေါင်း ၈၀ ကျော်တွင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသောကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးရေနံတွင်း ၀ န်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ယ်ယူသူသည်ကြွေးမြီမရှိဘဲကြီးထွားမှုနှင့်တိုးချဲ့မှုအတွက်ဒေါ်လာ ၆.၅ ဘီလီယံကိုရရှိခဲ့သည်။
ငွေမပါဘဲ $ 2.4B အကြွေးပြန်ဆပ်။
အခြားဖောက်သည်တစ် ဦး ဖြစ်သောနိုင်ငံပေါင်း ၁၅၀ ကျော်တွင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသည့်နိုင်ငံစုံစွမ်းအင်ကော်ပိုရေးရှင်းသည်သူတို့၏ငွေဖြစ်လွယ်မှုပြproblemsနာများကိုရှောင်ရှားပြီးငွေကိုအသုံးမပြုဘဲဒေါ်လာ ၂.၄ ဘီလီယံအကြွေးများကိုပေးဆပ်ခဲ့သည်။ countertrade အစီအစဉ်မှတဆင့်နာရီ။
၂၄ နာရီအတွင်းဒေါ်လာ ၁.၈ ဘီလီယံပိုင်ဆိုင်မှုများ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ဖြစ်သောအမေရိကန်ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးနှင့်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီသည် ၂၄ နာရီအတွင်းပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးဒေါ်လာ ၁.၈ ဘီလီယံရှိသည်။
ZERO ကုန်ကျစရိတ် AT OIL ရေနံချက်စက်ရုံသိမ်းယူ။
၀ ယ်ယူသူသည်မကြာသေးမီကကုန်သွယ်မှုနှင့် buyback + tolling + switch trading အနေဖြင့်ရေနံ 20,000 BPD ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့်အတူသုညကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်ရေနံစိမ်းအတွက် modular ရေနံချက်စက်ရုံကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။
သုညကုန်ကျစရိတ်မှာ $ 75M စက်ရုံစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ဖြစ်သောသံမဏိထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီသည်သူတို့၏စက်ရုံစွမ်းရည်ကိုဒေါ်လာ ၇၅ သန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏသည် ၄ ​​င်းတို့၏ငွေအရင်းအနှီးများလျော့နည်းသွားခြင်းမရှိဘဲတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးမှထုတ်လုပ်သောကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်သည်ကုန်ထုတ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ - driveline ထုတ်ကုန်များမှသည်စွမ်းအင်နည်းပညာများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအပိုင်းများအထိငွေသားအသုံးစရိတ်များကို ၆၀% လျှော့ချရန်၊ ငွေသားကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်အမြတ်ငွေတိုးရန်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်သုည ၀ ယ်ယူသည့်အရင်းအမြစ်များကိုအသုံးပြုသည်။
County ICAD $ US $ 190M ထဲသို့ $ 610M သို့လှည့်ပတ် Carl ICAHN ။
Trans World လေကြောင်းလိုင်း၏ဥက္ကchairman္ဌဟောင်း Carl Icahn သည် TWA ထံမှဒေါ်လာ ၁၉၀ သန်းအကြွေးတင်နေသည်။ အကြွေးဆပ်ရန်အချိန်ရောက်သောအခါလေကြောင်းလိုင်းသည်ဒေါ်လာသန်း ၁၀၀ သာရှိသောကြောင့်ငွေမပေးနိုင်ပါ။ လျင်မြန်သောတွေးခေါ်မှုရှိသောဘီလျံနာတစ် ဦး ဖြစ်သော Icahn သည်အရောင်းအ ၀ ယ်အရောင်းအ ၀ ယ်တစ်ခုနှင့်စျေးနှုန်းချိုသာသောအပိုဆောင်းလက်မှတ်များကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။ စုစုပေါင်းသဘောတူညီချက်မှာဒေါ်လာ (၆၁၀) သန်းဖြစ်သည်။ ထို့နောက်သူသည်ချက်ချင်းဆိုသလို Global Discount Travel Travel Services ကုမ္ပဏီအသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးသူ၏ဒေါ်လာသန်း ၁၉၀ ကိုပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်ထက်လျှော့စျေးလျှော့။ လက်မှတ်များကိုစတင်ရောင်းချခဲ့သည်။
TWA သည်ဤငွေပေးငွေယူတွင်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ သူတို့ကထိုင်ခုံများအပြင်အပြင်, ကြီးမားတဲ့လျှော့စျေးမှာလက်မှတ်တွေပေးခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့၏ $ 190 သန်းကြွေးမြီတာဝန်ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ (ပုံမှန်အားဖြင့်လေယာဉ် ၆၅ ရာခိုင်နှုန်းပြည့်သည်။ ထို့ကြောင့် ၃၅% နေရာလွတ်များမှာလေယာဉ်ပျံတက်ချိန်တွင်မည်သည့်အခါမျှရောင်းစားခံရနိုင်ခြင်းမရှိဘဲသူတို့၏ကြွေးမြီများကိုပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်နှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းတွင်ဒေါ်လာသန်း ၁၉၀ သာကျန်တော့မည်ဖြစ်သည်။ )
ရေနံကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်ရက် ၃၀ အတွင်းဒေါ်လာ ၃.၅ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိသောအဆောက်အအုံအသစ်များကိုငွေမချဘဲဝယ်ယူခဲ့သည်။
ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်ဒေါ်လာ ၅၇၅ သန်းတန်ဖိုးရှိပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ် ၂၃ စီးကိုငွေမ ချ၍ ဝယ်ယူခဲ့သည်။
စက်မှုထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူသည်ဒေါ်လာ ၅၇၈ သန်းတန်ဖိုးရှိသည့်စက်ယန္တရားများ၊ စက်ပစ္စည်းများ၊
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီသည်ဒေါ်လာ ၂၃၅ သန်းတန်တန်ဖိုးရှိသောမက်သနောစက်ရုံကိုငွေမ ချ၍ ဝယ်ယူခဲ့သည်။
မကြာသေးမီကရေနံကုမ္ပဏီတခုသည် ၂၀၀၀၀ BPD ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ရှိသည့်ရေနံစိမ်းအတွက်မော်ဂျူလာရေနံချက်စက်ရုံကို ၀ ယ်ယူခဲ့သည်။
Giovanni သည် ၁၂၃ နှစ်အရွယ်ဒေါ်လာ ၂၅၀ သန်းလည်ပတ်ငွေကြေးကုမ္ပဏီကို ၀ န်ထမ်း ၇၆၈ ယောက်နှင့် ၀ င်ငွေနည်းနည်းဖြင့်ဝယ်ယူခဲ့သည်။
သံမဏိထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီသည်စက်ရုံ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုဒေါ်လာ ၇၅ သန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပြီးငွေမချွေဘဲထုတ်လုပ်နိုင်မှုကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
၈။ ဖောက်သည်တစ် ဦး သည်၎င်းတို့အတွက်ကုန်ကျမည့်ဒေါ်လာတစ်ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိအိမ်ရာတစ်လုံးကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။
၉။ နောက်ထပ်ဖောက်သည်တစ်ယောက်ကဒေါ်လာ ၈၅၀ သန်းတန်ရုံးခန်းအဆောက်အအုံ၊ ကုမ္ပဏီကားများ၊ ငွေမရှိဘဲရခဲ့သည်။
၁၀။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်တစ် ဦး သည်သူတို့၏တန်ပြန်အရောင်းအ ၀ ယ်များမှအမြတ်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၅၀,၀၀၀,၀၀၀ မှလေးပုံတစ်ပုံရရှိသည်။
သင်အောက်ပါ CTO အစီအစဉ်မှတဆင့်အလားတူရလဒ်များကိုအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်။
အစီအစဉ် (CTO) ရလဒ်များ။
CTO အစီအစဉ်ပြီးဆုံးလျှင်သင်လုပ်နိုင်သည်မှာ -
ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ (စက်ယန္တရားများ၊ စက်ကိရိယာများ၊ နည်းပညာ၊ စက်ရုံတစ်ခုလုံး၊ သတ္တုတွင်း၊ အလှည့်ကျစက်ရုံစသည်တို့) ကိုငွေမချွေပါနှင့်။
မည်သည့်ကုမ္ပဏီတွင်မှငွေမရှိဘဲမည်သည့်ကုမ္ပဏီတွင်မဆိုဒေါ်လာ ၁၀ မီလီယံမှ ၅၀ ဘီလျံရှိသောအစုရှယ်ယာများကိုဝယ်ယူပါ။
တန်ပြန်အရောင်းအ ၀ ယ်များကို သုံး၍ ဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီသောအစိုးရစာချုပ်များကိုရယူပါ။
ခေတ်မီနည်းပညာ၊ နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင်မှုများကိုငွေမလိုဘဲရယူပါ။
သင်နှင့်အတူတန်ပြန်ရောင်းဝယ်မှုတန်ပြန်ရောင်းဝယ်မှုများလုပ်ရန် Fortune 500 ကုမ္ပဏီများကိုရယူပါ။
မည်သည့်စက်မှုဇုန်ကန်ထရိုက်များ၊ စီမံကိန်းများသို့မဟုတ်လိုချင်သောသွင်းကုန် / ၀ ယ်ယူမှုများကိုငွေမချဘဲငွေကြေးထောက်ပံ့ပါ။
မည်သည့် ၀ ယ်ယူပစ္စည်းကိုမဆို ၀ ယ်ယူခြင်း၊ အိမ်ခြံမြေများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုငွေမချွေတာပါ။
၁၁။ သင်၏ကုန်ကျစရိတ်၊ အရင်းအမြစ်များနှင့်စွန့်စားမှုများမတိုးမြှင့်ဘဲသင်၏ကုမ္ပဏီ၏အမြတ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ၁၀၀x ဖြင့်မြှောက်ပါ။
(၆) ၆ နာရီအတွင်းသင်၏တန်ပြန်ရောင်းဝယ်မှုဆိုင်ရာအရောင်းအ ၀ ယ်များတွင် ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုဆွဲဆောင်ပါ
၁၄။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုတန်းစီ။ ၂၄ နာရီအတွင်းသင်၏တန်ပြန်အရောင်းအ ၀ ယ်အတွက်သူတို့ငွေများယူရန်တောင်းပန်ပါ
၁၅။ ဒေါ်လာ ၁ သိန်းမှဒေါ်လာ ၁၀၀ ဘီလီယံအထိအတိုးများသောငွေကြေးမဆိုလုံလုံခြုံခြုံထားပါ။
၁၆။ သင်၏ယှဉ်ပြိုင်မှုကိုဆီလျှော်အောင်လုပ်ခြင်း၊ စျေးကွက်ကိုလွှမ်းမိုးခြင်း၊ သင်၏စီးပွားရေးကိုပြောင်းလဲခြင်း၊ ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည့် ၀ င်ငွေတိုးတက်မှုနှင့်အသစ်သောဒေါ်လာထရီလီယံစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကံကြမ္မာကိုဖန်တီးပါ။
20 ။ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်းသင်၏ကုမ္ပဏီ၏ ၀ င်ငွေနှင့်အမြတ်ငွေကို ၁၀၀၀% တိုးအောင်လုပ်ပါ။
၂၁ နာရီအတွင်းသင်၏ထုတ်ကုန်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ပစ္စည်းများအားလုံးကိုရောင်းချပါ။
၂၃။ ၇ ရက်အတွင်းရုန်းကန်နေသောကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုလှည့်ပါ။
၂၆။ သင်ဝယ်ယူသောကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးနီးပါးကို ၉၀% အထိလျှော့စျေးရယူပါ။
၂၈။ သင့်အဖွဲ့အစည်း၏အကြွေးအားလုံးကိုရက် ၃၀ အတွင်းပြန်လည်ပေးဆပ်ပါ။
၂၉။ ကုန်သွယ်မှုခရက်ဒစ်ကိုငွေသားအဖြစ်ပြောင်းပါ။ ကုန်သွယ်မှုခရက်ဒစ်သို့ငွေသားပြောင်းပါ။
အစီအစဉ် 1 ။
ဘယ်လိုဝယ်ရမလဲ ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ (စက်ယန္တရား၊ စက်ပစ္စည်းများ၊ နည်းပညာ၊ စက်ရုံတစ်ခုလုံး၊ သတ္တုတွင်း၊ အလှည့်ကျစက်ရုံစသည်တို့) သည်ငွေမချွေပါ။
ငွေမရှိဘဲဒေါ်လာ ၁၀ မီလီယံမှ ၅၀ ဘီလီယံကုန်ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီကိုမည်သို့ ၀ ယ်ရမည်နည်း။
ရှုပ်ထွေးသောနည်းပညာ၊ နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင်မှုများကိုငွေမပါဘဲ ၀ ယ်ရန်။
မည်သည့်စက်မှုစီမံကိန်းများ၊ ကန်ထရိုက်များ၊ လိုချင်သောသွင်းကုန်များ၊
ငွေမရှိဘဲဒေါ်လာ ၁၀ မီလျံမှ ၅၀ ဘီလီယံကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမည်သို့ ၀ ယ်ရမည်နည်း။
ပိုက်ဆံမရှိဘဲ $ 10M မှ $ 50B တန်ဖိုးရှိပိုင်ဆိုင်မှုကိုဘယ်လိုဝယ်မလဲ။
ငွေမချဘဲဒေါ်လာ ၁၀ မီလျံမှ ၅၀ ဘီလီယံရှိသောအိမ်ခြံမြေတစ်ခုကိုမည်သို့ ၀ ယ်ရမည်နည်း။
လက်လီကုမ္ပဏီတစ်ခုမှဒေါ်လာ ၁၀ မီလီယံမှ ၅၀ ဘီလျံအစုရှယ်ယာများ ၀ ယ်ယူရန်နှင့်မည်သို့ ၀ ယ်ရမည်နည်း။
နည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုမှဒေါ်လာ ၁၀ မီလီယံမှ ၅၀ ဘီလျံအစုရှယ်ယာများ ၀ ယ်ယူရန်မည်သို့ ၀ ယ်ရမည်နည်း။
ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီမှဒေါ်လာ ၁၀ မီလီယံမှ ၅၀ ဘီလျံရှိသောအစုရှယ်ယာများကို ၀ ယ်ရန်မလိုပါ။
ပိုက်ဆံမရှိတဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာဒေါ်လာ ၁၀ မီလီယံမှ ၅၀ ဘီလီယံရှိတဲ့အစုရှယ်ယာတွေကိုဘယ်လိုဝယ်ရမလဲ။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ၀ န်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီမှဒေါ်လာ ၁၀ မီလီယံမှ ၅၀ ဘီလျံရှိသောအစုရှယ်ယာများကို ၀ ယ်ရန်မလိုပါ။
မီဒီယာကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်ဒေါ်လာ ၁၀ မီလီယံမှ ၅၀ ဘီလျံရှိသောအစုရှယ်ယာများ ၀ ယ်ယူရန်မည်သို့ ၀ ယ်ရမည်နည်း။
သံမဏိကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်ဒေါ်လာ ၁၀ မီလီယံမှ ၅၀ ဘီလျံရှိသောအစုရှယ်ယာများ ၀ ယ်ယူရန်မည်သို့ ၀ ယ်ရမည်နည်း။
ငွေမရှိဘဲအိမ်ခြံမြေကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်ဒေါ်လာ ၁၀ မီလီယံမှ ၅၀ ဘီလျံရှိသောအစုရှယ်ယာများကိုမည်သို့ဝယ်ယူရမည်နည်း။
ငွေမရှိဘဲဟိုတယ်တစ်ခုတွင် $ 10M မှ $ 50B အစုရှယ်ယာများကိုမည်သို့ ၀ ယ်ယူရမည်နည်း။
ငွေမချဘဲလေကြောင်းလိုင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်ဒေါ်လာ ၁၀ မီလီယံမှ ၅၀ ဘီလျံရှိသောအစုရှယ်ယာများကိုမည်သို့ဝယ်ယူရမည်နည်း။
ရေနံ ၀ န်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုမှဒေါ်လာ ၁၀ မီလီယံမှ ၅၀ ဘီလျံရှိသောအစုရှယ်ယာများ ၀ ယ်ယူရန်မည်သို့ ၀ ယ်ရမည်နည်း။
အစီအစဉ်3။
ပွင့်လင်းသောအစိုးရစာချုပ်များ၊ ၀ ယ်ယူမှုသတိပေးချက်များ၊ တင်ဒါအသိပေးချက်များ၊ စာချုပ်အခွင့်အလမ်းများ၊ ဤသည်မှာနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၀ ကျော်မှအစိုးရသတင်းရင်းမြစ်များမှနောက်ဆုံးရအချက်အလက်များဖြစ်သည်အမေရိကန်အပါအဝင်။
တန်ပြန်အရောင်းအ ၀ ယ်များအတွက်အဓိကအလားအလာရှိသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအဆုံးမဲ့ထောက်ပံ့ပေးသည့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလမ်းညွှန်တစ်ခု။
အမေရိကန်အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၈၀ ရှိအစိုးရစာချုပ်များကိုအနိုင်ရရန်အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်မီညှိနှိုင်းမှုနှင့်တန်ပြန်ရောင်းဝယ်မှုလမ်းညွှန်များ၏တစ်မူထူးခြားသောစုစည်းမှု။
အစီအစဉ်4။
$ 100B အမြတ်မရှိပိုက်ဆံချနှင့်အတူမဟာဗျူဟာကိုထေမိ။
အလွန်အောင်မြင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ဒေါ်လာ ၃၀၀ ဘီလီယံတန်ပြန်သောမဟာဗျူဟာ။
သင်၏စီးပွားရေး ၀ င်ငွေကိုတစ်နှစ်လျှင်အနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ တိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်တိကျသောတန်ပြန်နည်းဗျူဟာ ၁၀ ခု။
100X ကြီးထွားမှုမဟာဗျူဟာများ တန်ပြန်ကုန်သွယ်မှုကိုအသုံးပြု။ ကုမ္ပဏီများသည် 100X ကြီးထွားမှုမည်မျှကြီးကျယ်ကြောင်း။
တန်ပြန်နည်းဗျူဟာစက်ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုမဆီလျှော်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ၊ စျေးကွက်ကိုဘယ်လိုလွှမ်းမိုးနိုင်သလဲ၊ မင်းရဲ့စီးပွားရေးကိုတော်လှန်ခြင်း၊ ကြိုတင်ခန့်မှန်းရတဲ့ ၀ င်ငွေတိုးတက်မှုနှုန်းကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ။
ဘိုးအင်းကုမ္ပဏီ - ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာ ၇ ချက်သည်ဘိုးအင်းကုမ္ပဏီကိုကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးလေကြောင်းကုမ္ပဏီနှင့်အမေရိက၏အကြီးမားဆုံးကုန်ထုတ်လုပ်မှုတင်ပို့သူဖြစ်စေခဲ့သည်။
သင်၏သက်သေပြချက်တန်ပြန်သောနည်းဗျူဟာ ၁၀ ခုသည်သင်၏ကုန်ကျစရိတ်များ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့်စွန့်စားမှုများမတိုးမြှင့်ဘဲသင်၏ကုမ္ပဏီ၏အမြတ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ၁၀၀x အထိမြှောက်ရန်မည်သည့်ပြိုင်ဘက်မျှမသိပါ။
နယူးယောက်စီးတီးရှိ ၅၃ ထပ်ရုံးခန်းတစ်ခု၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဒေါ်လာ ၅၄၈ သန်းတန်ပြန်တန်ပြန်ရောင်းဝယ်မှုသည်မည်သို့ပြီးဆုံးသွားခဲ့သည်။
အစီအစဉ်5။
All-in-one ရန်ပုံငွေဖြေရှင်းချက် - အခြားသူများ၏ငွေကြေး၊ ချေးငွေနှင့်အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြု၍ သင်၏စီးပွားရေးအရောင်းအ ၀ ယ်များနှင့်စီမံကိန်းများအားငွေကြေးပံ့ပိုးရန်ကုန်သွယ်မှုတန်ဘိုးနှင့်မည်သို့ချိန်ညှိနိုင်သည်။ အတိုးနှုန်းမရှိပါ ချေးငွေမလိုပါ အကြွေးစစ်ဆေးစရာမလိုပါဘူး အကြွေးမရှိ ငွေပြန်အမ်းခြင်းမရှိပါ
All-in-one ပြန်လည်နာလန်ထူဖြေရှင်းနည်း အပြည့်အဝစာအုပ်တန်ဖိုးရှိပိတ်ဆို့ထားသည့်ရန်ပုံငွေများကိုပြန်လည်နာလန်ထူရန်တန်ပြန်ရောင်းဝယ်မှုကိုမည်သို့အသုံးပြုမည်နည်း။
All-In-One ဈေးကွက်လက်လှမ်းမီမှု အသစ်သော (သို့) ခက်ခဲသောစျေးကွက်များသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်တန်ပြန်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်း၊
All-in-one ရှောင်တိမ်းမှုဖြေရှင်းချက် - ပိတ်ဆို့ထားသောငွေကြေးများ၊ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများ၊ စျေးနှုန်းများနှင့်လဲလှယ်ထိန်းချုပ်မှုများကိုတရား ၀ င်ကျော်လွှားရန်ကုန်သွယ်မှုတန်ဘိုးကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်နည်း။
စီးပွားရေးတိုးတက်မှုအဖြေ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ နည်းပညာ၊ စက်မှုလက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးပေးခြင်းနှင့်ကုန်သွယ်မှုနှင့်အခြားနိုင်ငံများသို့တင်ပို့မှုတိုးချဲ့ခြင်းကိုမြန်ဆန်စွာခြေရာခံနိုင်ရန်တန်ပြန်ရောင်းဝယ်မှုကိုမည်သို့အသုံးပြုမည်နည်း။
အစီအစဉ်6။
သင်၏ကုန်သွယ်မှုအရောင်းအ ၀ ယ်တွင် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအမြောက်အမြားကိုဆွဲဆောင်ရန်သက်သေပြနိုင်သောနည်းလမ်းသည် ၆ နာရီအတွင်းသင့်အတွက်ကုန်ကျငွေလုံးဝမရှိပါ။ သင်၏စီးပွားရေးစတင်ချိန် ၆ နာရီအတွင်းဖောက်သည်တစ် ဦး ရရှိရန်အကြွင်းမဲ့အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းနှင့်နေရာ။
သင့်ရဲ့အလားအလာကိုကွဲလွဲနေတဲ့ဖန်ခွက်ကိုဖြတ်ပြီးသွားပြီးသင့်ရဲ့အရောင်းအ ၀ ယ်အခွင့်အလမ်းမှာဘယ်သူ့ကိုမှစကားမပြော၊ မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်း၊ လက်ချောင်းကိုမတင်ဘဲ၊ သင့်အိမ်နဲ့ရုံးကိုတောင်မှမထွက်ခွာဖို့တောင်းပန်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။
လက်သည်းများထဲမှစိတ်အားထက်သန်သောငွေကိုရှာဖွေရန်မည်သည့်နေရာနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်နည်း။ IRRESISTILE ကသူတို့ရှေ့တွင်ထားရန်ကမ်းလှမ်းသည်။
သင်၏တန်ပြန်ရောင်းဝယ်မှုများအတွက်ထိပ်တန်းအခကြေးငွေများကိုမည်ကဲ့သို့ပေးရမည်နည်း - သင့်ကိုရှာဖွေနေသောဖောက်သည်များနှင့်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသောလက်တွဲဖော်များကိုမည်သည့်နေရာတွင်ရှာရမည်နည်း။ (အဘယ်သူမျှမရောင်းချသို့မဟုတ်ယုံကြည်စိတ်ချလိုအပ်သော။ )
သင်ကိုယ်တိုင်အလားအလာရှိသောကုန်သွယ်ဖက်မိတ်ဖက်များအား“ ကြိုတင်ရောင်းချ” ရန်အလွယ်ကူဆုံးသောနည်းလမ်းမှာသင်နှင့်စကားမပြောခင်! (သင်ကစုစုပေါင်းစီးပွားရေး“ လေ့လာသူ” ဖြစ်နေလျှင်ပင်အလုပ်လုပ်သည်။ )
၂၄ နာရီအတွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုတန်းစီ။ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်များအတွက်ငွေများယူရန်လက်တွေ့ကျတောင်းပန်ပါသည်။
အစီအစဉ်7။
Fortune 500 ကုမ္ပဏီများသည်သင်နှင့်ကုန်သွယ်ရေးပြန်လည် ၀ ယ်ယူခြင်းသဘောတူညီချက်များကိုပြုလုပ်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းဗျူဟာဖြစ်သည်။ သင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့အသစ်ရောက်သော်လည်းသင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းကိုမည်သူမျှမသိ၊ သင်ဟာသူငယ်ချင်း၊ အဆက်အသွယ်၊ စီးပွားရေးဆက်သွယ်မှုမရှိတဲ့ဂူထဲမှာနေရင်တောင်
တစ်လကိုဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာရအောင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာသင့်ရဲ့ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းကိုစတင်ရန် Facebook ကြော်ငြာများကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ။
ကမ္ဘာ့အဆင့်မီတန်ပြန်အင်ပါယာတစ်ခုစတင်ရန် ၂၄ မျက်နှာပါ BLUEPRINT ။
အစီအစဉ် 8 ။
ယနေ့သင်၏ပထမဆုံးတန်ပြန်အရောင်းအ ၀ ယ်ကိုအောင်နိုင်ရေးအတွက်တစ်ဆင့်ချင်းအနေနှင့်ညစာမစားမီငွေရှာပါ။ မနက်ဖြန်သင်၏ဘဏ်အကောင့်မှရလဒ်များကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလိုအပ်သည့်စိတ်ရှုပ်စရာအချက်များမပါဘဲကုန်သွယ်ရေးမှတစ်ဆင့်မိနစ် ၆၀ သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသောငွေများဖြင့်အဆုံးမဲ့မရေမတွက်နိုင်သောငွေများကိုဖန်တီးရန်အဆင့်ဆင့်စနစ်။
သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိသမျှအမြတ်အစွန်းအများဆုံးကုန်သွယ်မှုသဘောတူညီချက်အချို့ကိုတည်ဆောက်ရန် (လူကြိုက်များသောစူပါဟီးရိုးရုပ်ရှင်ကားတွင်ဖော်ပြထားသည်) အနည်းငယ်သာသိရှိထားသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
တစ်နေ့လျှင် ၁၀ မိနစ်ခန့်ကြာမြင့်သောအဆင့် ၃ ဆင့် (ညနေခင်း၌ဖြစ်စေ၊ နံနက်ယံ၌ဖြစ်စေဖြစ်စေ) သည်သင်နှင့်ကုန်သွယ်ရေးမှရရှိသော ၀ င်ငွေ ၇ ခုမှ ၀ င်ငွေစီးဆင်းမှုကိုအာမခံပေးလိမ့်မည်။
အခြားသူများ၏အကြံဥာဏ်များ၊ အချိန်၊ ငွေနှင့်အကြွေးများအသုံးပြုရန်အတွက်တန်ပြန်လမ်းညွှန်။
အစီအစဉ်9။
၇ သင်ခြစ်ရာကနေစတင်လျှင်သင်ချက်ချင်းအကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည့်တန်ပြန်မှုအသေးစိတ်ပုံစံများကို (ဥပမာ၊ ပြီးမြောက်အောင်သင် 'ချဉ်းကပ်မှု' အဆိုပြုချက်များ၊ scripts of template အပါအ ၀ င်) တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များဖြင့်ရေးသားခဲ့သည်။ နှင့်သင်သုံးနိုင်သည်အက္ခရာများ) ။
သင်၏အမြတ်အစွန်းနှင့် ၀ င်ငွေစီးဆင်းမှုအမြောက်အမြားကိုလွတ်မြောက်ရန်အမြတ်အစွန်းတန်သောအရောင်းအ ၀ ယ်ပုံစံ ၁၀ ခု (သင်ချက်ချင်းထွက်။ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည်) ။
တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၁ သန်းမှ ၁၀ မီလီယံအထိကျန်ရှိနေသေးသောဝင်ငွေရရှိနိုင်သည့်“ no-brainer” တန်ပြန်ရောင်းဝယ်မှုများကိုစုစည်းရန်အရူးမခံသော (ဖြည့်စွက်ကွက်လပ်) ပုံစံ (သင်ဤအရောင်းအ ၀ ယ်အမျိုးအစား ၃ ခုမှ ၄ ခုအထိအမှန်တကယ်လုပ်နိုင်သည်) တစ်လ
သငျသညျပြည့်စုံစစ်ဆေးရမည့်စာရင်း, ကားချပ်, ဇယား, ဓာတ်ပုံများနှင့်ဥပမာကိုရ။ ဤအရာအားလုံးသည်သင်၏တန်ပြန်ရောင်း ၀ ယ်ရေးအားထုတ်မှုများကို“ လုံခြုံမှုကင်းမဲ့။ ” အလွန်အမြတ်အစွန်းဖြစ်စေရန်ကူညီလိမ့်မည်။
အစီအစဉ် 10 ။
အစိုးရစာချုပ်များအတွက်အပေးအယူပြုမှုနှင့်အပေးအယူညှိနှိုင်းမှု ၇ ခုသည် Boeing ကုမ္ပဏီသည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးလေကြောင်းကုမ္ပဏီနှင့်အမေရိက၏အကြီးမားဆုံးကုန်ထုတ်လုပ်မှုတင်ပို့သူဖြစ်သည်။.... နှင့်သင်မည်သည့်အစိုးရကန်ထရိုက်အနိုင်ရခဲ့သူတို့ဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာ "လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်" အမေရိကန်အပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း 80 အတွက်။
ဘယ်လိုဖြစ်ရပ်မှန်သမိုင်း (အမှန်တကယ်ဥပမာများ) သမိုင်းတွင်အအောင်မြင်ဆုံးကုမ္ပဏီများ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာပါ ၀ င်သောကန်ထရိုက်စာချုပ်များကိုအနိုင်ရရှိရန်အတွက်တန်ပြန်ရောင်းဝယ်မှုကိုအသုံးပြုခဲ့သည် နှင့်န့်အသတ်စည်းစိမ်ဥစ္စာတစ်သက်တာ generate- ယခုသင်လုပ်နိုင်သည်
countertrade နှင့် offset ကန်ထရိုက်များ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဒေတာဘေ့စ။ SIPRI မှပေးသောအချက်အလက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမှအချက်အလက်များကိုစုစည်းထားသည်။
offset ကန်ထရိုက်နှင့်ပတ်သက်။ အမေရိကန်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဌာနစည်းမျဉ်းများ။
အမှန်တကယ်စာမျက်နှာလေးမျက်နှာပါတန်ပြန်စာချုပ်။ ရှေ့နေကဒီအစီအစဉ်ကိုရေးဆွဲရန်ဒေါ်လာ ၂၅၀၀၀ ပေးသည်၊ သို့သော်ဤအစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်သင်၏အခမဲ့ဖြစ်သည်.
အစီအစဉ် 11 ။
ကာကွယ်ရေးကုန်သွယ်မှုအစီရင်ခံစာများအတွက် 24 Offsets ။
အမေရိကန်မှထုတ်လုပ်သောကုမ္ပဏီများသည်ဒေါ်လာ ၁၅.၅ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိသည်။
အမေရိကန်၏ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုသည်စုစုပေါင်းဒေါ်လာ ၁.၆၇ ထရီလီယံရှိသည်။
အမေရိကန်စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်သောကာကွယ်ရေးပို့ကုန်တင်ပို့မှုကန်ထရိုက်ဒေါ်လာ ၁၄.၆ ဘီလီယံ။
၁၅ ဒေါ်လာ ၁၈.၄ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိကာကွယ်ရေးနှင့်ဆက်စပ်သောကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့မှု။
အမေရိကန်ကုမ္ပဏီများမှအပေးအယူလုပ်မှုများသည်ဒေါ်လာ ၄.၃၁၄ ဘီလီယံဖြစ်သည်။
အမေရိကန်ကုမ္ပဏီ ၆၄ ခုမှ ၁,၁၇၉ ခုသည် ၅၁ နိုင်ငံနှင့်ဒေါ်လာ ၂၀၃.၅၉၉ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိသဘောတူညီမှုများကိုထေမိခဲ့သည်။
အမေရိကန်ကုမ္ပဏီ ၁၃ ခုနှင့်ဒေါ်လာ ၁၃ ဒသမ ၆၂၂ ဘီလီယံတန်ဖိုးဖြင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။
အခွန်နှုတ်ယူရန်သင်၏တန်ပြန်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုများကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်နည်း။ IRS မှအကြံဥာဏ်များသည်စည်းမျဉ်းများအားလုံးကိုလိုက်နာရန်အတိအကျလွယ်ကူသောနည်းလမ်းကိုပြလိမ့်မည်။
အစီအစဉ် 12 ။
အခြေခံကုန်သွယ်မှုနှင့် offset ။
ခ။ နိုင်ငံ၏ကုန်သွယ်ရေးအမျိုးအစားများ - အထောက်အထားအကောင့်များ၊ Build-Operate-Transfer (BOT)၊ ပြန်လည် ၀ ယ်ယူခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပိတ်ဆို့ထားသောရန်ပုံငွေများ၊ တန်ပြန် ၀ ယ်ယူခြင်း၊ ရောင်း ၀ ယ်ခြင်း (တိုက်ရိုက် offset နှင့်သွယ်ဝိုက် offset)၊ လဲလှယ်ခြင်း၊ တိုးမြှင့်, စက်မှု လျော်ကြေးနှင့်စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု.
offset ၏ C. 1. အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ 2. offset ၏အနှစ်သာရ။ ၃ ။ 3. အီးယူအတွက် Offset ။ ၅ ။ ၆ ။ ၇ ။ 4. သမုဒ္ဒရာနိုင်ငံများတွင် offset ။ ၉ ။ ၁၀ ။ ၁၁ ။ ၁၂ ။ ၁၃ ။ ၁၄ ။ ၁၅ ။
(the) ၂၁ ရာစုအတွင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးတွင်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်အပေးအယူလုပ်ခြင်း၏အခန်းကဏ္။ ။
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ WTE ပလက်ဖောင်း။
ဇူလိုင်လ 28 မှ 31, 2021. TIME: 4-7 pm တွင် EST ။
ပရိုဂရမ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းကသင့်အားရက်ပေါင်း ၉၀ အန္တာရာယ်ကင်းသည့်စမ်းသပ်မှုအတွင်းတွင်လင်းနို့ချက်ချင်းလက်ငင်းငွေပေးချေခြင်း မှလွဲ၍ သင်မည်မျှထိခိုက်မည်နည်း။ အလေးအနက်ထား! ဒီပရိုဂရမ်ကခင်ဗျားစိတ်ထဲမှာမှုတ်ထုတ်လိုက်ရင်သင်ထင်ထားတာထက် ၀ င်ငွေဖြစ်နိုင်ခြေခေါင်းလောင်းများကိုပိုမိုမြည်စေလိမ့်မယ်။
သင်၏မေးခွန်းကိုပိုမိုတိုက်ရိုက်ဖြေဆိုရန်၊ ယနေ့စျေးလျှော့။ သင်အားယာဉ်မောင်းကိုစမ်းကြည့်ပါကရက်ပေါင်း ၉၀ တိုင်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
မင်းရဲ့စုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဒေါ်လာ ၂၅၀၀ ပဲ လျှင်သင် အောက်ဖော်ပြပါ countdown timer မတိုင်မီဤအစီအစဉ်အတွက်မှတ်ပုံတင်ပါ - '0.0.0.0.0 ။ '
သင်၏အစီအစဉ်ကြေးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရက်ပေါင်း ၉၀ ဖြင့်ငွေ ၁၀၀% အကာအကွယ်ပေးထားသည်။
အစီအစဉ်ပြီးဆုံးသည်နှင့်သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ရောက်ရန်ပရိုဂရမ်ကိုအသုံးပြုရန်ရက်ပေါင်း ၉၀ ရှိသည်။ ရက်ပေါင်း ၉၀ ကြာပြီးနောက်၊ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစာရွက်ပေါ်တွင်ကြည့်။ အနည်းဆုံး ၁၀၀x သင့်ငွေတန်ဖိုး (၁၀၀၀% ROI) မလုပ်ခဲ့သို့မဟုတ်သင့်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကိုမအောင်မြင်ခဲ့ဟုကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောလျှင်သင်အစီအစဉ်ကြေးကိုဝမ်းမြောက်စွာပြန်အမ်းပါမည်။
ထို့အပြင်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုသို့မဟုတ်အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲသင်အပြည့်အဝပြန်အမ်းငွေရလိုလျှင်, သင်ချက်ချင်းသင်၏ပိုက်ဆံပြန်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ မေးခွန်းများမေးခြင်းနှင့်အဘယ်သူမျှမလုပ်ရတဲ့။
သန်း - အကျိုးရလဒ်များ။
၁၆။ Merlyn Moore သည်ဤစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းမှလအနည်းငယ်အတွင်းဒေါ်လာ ၇၀.၅ သန်းကျော်ရရှိခဲ့သည်။